ENTONA MANGEJA HAFANANA : Tompon’antoka ihany koa ny sehatry ny ala - ewa.mg
ENTONA MANGEJA HAFANANA : Tompon’antoka ihany koa ny sehatry ny ala
News - ENTONA MANGEJA HAFANANA : Tompon’antoka ihany koa ny sehatry ny ala
Mamoaka entona mangeja hafanana (gaz à effet de serre) be indrindra eto Madagasikara ny sehatry ny ala. Anisany mahatonga izany ny doro tanety, ny fanapahana ny ala. Isan-taona dia manao tatitra momba ny fandrefesana ny entona mangeja hafanana ny firenena malagasy satria nankatoa ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fiovaovan’ny toetr’andro. Ho fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo teknisianina amin’ny fandrefesana ity entona ity eo amin’ny sehatry ny ala dia manatanteraka atrik’asa fampiofanana ny birao nasionaly mpandrindra ny REDD+ (BNC REDD+), eo ambany fiahian’ny ministeran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ao anatin’ny telo andro. Nanomboka omaly 16 aprily ary hifarana rahampitso 18 aprily 2019 izany. « Hatramin’izay efa nanao tatitra momba ny entona mangeja hafanana i Madagasikara. Mbola nahitàna tsy fahatomombanana anefa izany ka izany indrindra no tanjon’ity atrik’asa ity mba hanatsarana ny tatitra atao », hoy ny mpandrindra nasionaly ny BNC REDD+, Rakotosoa Andrianina nandritra ny fanokafana ny atrik’asa.
Tohana avy amin’ny fanjakana amerikanina amin’ny alalan’ny USAID sy ny USFS ity fampiofanana ity. Ao anatin’ny fiofanana ny fampiasana ny rindram-baiko vaovao ALU, fandrefesana etona mangeja. Raha ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny BNC REDD+ hatrany dia ao anatin’ny fanatanterahana ny rohi-fiasa REDD+, miompana amin’ny fanalefahana ny fiovaovan’ny toetry ny andro amin’ny alalan’ny fanomezana tambiny ara-bola ireo ezaka fampihenana ny entona mangeja hafanana vokatry ny faharipahana sy ny fahasimban’ny ala ihany koa ity atrik’asa ity. Vokatry ny fiakaran’ny tahan’ny entona mangeja dia simba ny sosona ozonina ka izay no miteraka fiovaovan’ny toetry ny andro. Manoloana izany dia manana vina hampidina ny entona mangeja ho 14 isan-jato i Madagasikara.
Cet article ENTONA MANGEJA HAFANANA : Tompon’antoka ihany koa ny sehatry ny ala est apparu en premier sur déliremadagascar.
Fivorian’ny minisitra sy ny filohan’ny oniversite: hatomboka volana marsa avokoa ny taom-pianarana
Hatomboka amin’ny volana marsa avokoa ny taom-pianarana ho an’ny oniversite enina eto Madagasikara, araka ny tapaka tao amin’ny fivorian’ny minisitry ny Fampianarana Ambony, profesora Richard Blanche Nirina sy ny filohan’ny oniversite enina, izay fanao isan-taona. Amin’izao fotoana izao, mbola mizotra ny taom-pianarana ka misy ny oniversite hamita ny taom-pianarana amin’ny desambra, ny sasany mety hiitatra hatramin’ny taona 2020. Toromarika nomen’ny minisitra ny tokony hisantarana ny taom-pianarana amin’ny fotoana iray. Mila mitovy koa ny fitantanana ny oniversite rehetra ka hampiasa ny comptabilité analytique ny tompon’andraikitra hampirindra ny kajy, hampifanaraka ny vola misy eo an-tanana sy ny asa hotanterahina. Hisy teknisianina havanana amin’ny fitantanam-bola hiara-kiasa amin’ireo tompon’andraikitry ny minisitera misahana ny vola. Napetraka ihany koa fa 1500 ora no tokony hataon’ny mpampianatra tsirairay, arakaraka ny asany fa misy ny fandaminana azo atao.Hojerena ny fanatanterahana ny fampanantenana Voaresaka tao anatin’ny fihaonana koa ny fitakian’ny mpampianatra mpikaroka eto Antananarivo (Seces). An-dalana avokoa ny antontan-taratasy ilaina min’ny fanatanterahana ny fampanantenana nataon’ny praiminisitra ka hanara-maso ny fivoaran’izany ny minisitera.Ho an’ny oniversiten’i Toamasina, efa vonona hanaraka ny toromarika amin’ny fitantanana mangarahara ny tompon’andraikitra, hoy ny fanazavan’ny filohany, i Zafitody Conscient.VonjyL’article Fivorian’ny minisitra sy ny filohan’ny oniversite: hatomboka volana marsa avokoa ny taom-pianarana a été récupéré chez Newsmada.
Ambohimanambola : Lehilahy voahitsaky ny lamasinina, tapaka nipitika ny tongony
Loza mahatsiravina no nitranga tetsy Ambohimanambola ny sabotsy maraina teo. Lehilahy iray no voahitsaky ny lamasinina teny an-toerana. Potika sy ny nipitika mihitsy ny tongony. Tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany maraina teo no nitranga ny loza. Lehilahy iray izay variana natory teo amoron-dalana no voahosin’ny fiaran-dalamby nandalo teny amin’iny faritra Ambohimanambola iny. Raha ny fampitam-baovao azo avy amin’ireo mpitandro filaminana teny an-toerana dia hoe mamo io rangahy io, ny alin’io ary tafatory teo amin’io lalam-by io. Nihevitra angamba ranamana fa tsy misy fiaran-dalamby mandalo intsony toy ny ankabeazan’ireo lalam-by eto an-drenivohitra izy io, na efa tena diso tsy nahatsiaro tena intsony noho ny zava-mahadomelina nohanina ka tsy nahafantatra fa teo amina lalam-by izy no natory. Raha ny fanazavàna azo dia efa nanisy anjomara fanairana ilay fiaran-dalamby tamin’ny fotoana nandalovany. Iaraha-malala ihany koa fa sarotra ho an’ny fiaran-dalamby ny mijanona haingana raha sendra loza. Tamin’io fotoana io dia hitan’ilay mpitondra fiaran-dalamby ny lehilahy. Nanohy nampaneno ny anjomara hatramin’ny farany moa izy tamin’izany. Taitra ihany nony farany ilay lehilahy, saingy efa tara loatra. Raha afaka ny vatany dia ny tongony an-kavanana no taraiky, izay voatetin’ny kodiarana. Nandriaka ny rà. Tapaka tarangana mihitsy izany tongotra izany, hatreo amin’ny kitrony midina. Nitangorona ny fokonolona ary niezaka namonjy ity olona tra-doza ity. Voalaza moa teo fa nandray ny andraikiny ihany koa ilay mpitondra an’ilay lamasinina namonjy ilay lehilahy tapa-tongotra. Nalefa avy hatrany tany amin’ny toeram-pitsaboana ity farany ary efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy. Nijery ifotony ny zava-nisy kosa ireo zandary misahana iny faritra iny, raha ireo pôlisy misahana manokana ny zotra an-dalamby no manatanteraka ny fanadihadiana. m.LL’article Ambohimanambola : Lehilahy voahitsaky ny lamasinina, tapaka nipitika ny tongony a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Tetikasa Kazan – EPQ: hahazo 5 hatramin’ny 25 tapitrisa ariary ireo mpandresy
Nisokatra, ny faran’ny volana jolay lasa teo ary haharitra hatramin’ny 14 aogositra izao, ny fametrahana ny antontan-taratasin’ireo maniry hifaninana amin’ilay fifaninanana « Prix de bonnes pratiques en éducation physique de qualité (EPQ). Tetikasa, nomena ny anarana hoe « Fanoitra », karakarain’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, tafiditra indrindra anatin’ny famolavolana ilay Vinan’asa Kazan an’ny Unesco. Araka ny loharanom-baovao, hisitraka famatsiam-bola 5 hatramin’ny 25 tapitrisa ariary ireo mpifaninana mendrika ary hahazo ny anarana ho mpandray anjara mendriky ny EPQ ho amin’ity taona 2019 ity.Mariiana fa hatao ny 16 sy 20 aogositra izao ny fisafidianana ny antontan-taratasin’ireo mpandray anjara ka hamoahana izay dimy mendrika indrindra. Ny 23 aogositra izao kosa ny hamoahana ireo anarana ireo amin’ny fomba ofisialy.Misy ny fepetra tsy maintsy arahina ao anatin’ity fifaninanana ity ary azo jerena ao amin’ny tranonkalan’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena www.mjs.gov.mg izany. Eny amin’ny Akademia nasionaly ny fanatanjahantena na ny Complexe scolaire Ampefiloha, na eny amin’ny biraon’ny DRJS manerana ny Nosy, ny hahafahana manatitra ny antontan-taratasy hifaninana, afaka alefa amin’ny adiresy mailaka ihany koa anefa, araka ny fanazavana hatrany. Mi.RazL’article Tetikasa Kazan – EPQ: hahazo 5 hatramin’ny 25 tapitrisa ariary ireo mpandresy a été récupéré chez Newsmada.
Taorian’ny nahafaty ilay ben’ny Tanàna: tsy tana ny ain’ilay CB-n’ny zandary voatifitry ny dahalo
Namoy ny ainy, omaly rehefa avy nialana nenina tao amin’ny hopitaly miaramila Soavinandriana (Homi), ny zandary prinsipaly kilasy ambony (GPHC) Solohery Narivelo, kaomandin’ny tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena (CB) ao Befandriana Avaratra…Natao daholo ny ezaka rehetra nanavotana ity zandary ity tamin’ny fitsaboana azy noho ny ratra nandritra ny fanafihan-jiolahy nitranga tao Befandriana Avaratra, ny alin’ny 29 jolay lasa teo kanefa tsy avotra intsony ny ainy. Tsiahivina fa nodimandry ny 1 aogositra ilay ben’ny Tanànan’i Belalona Befandriana Avaratra izay voatifitra niaraka taminy tamin’io asan-jiolahy io. Ny talata tolakandro teo no nigadona ao Befandriana Avaratra ny fatin’ny ben’ny Tanàna izay voatifitra niaraka tamin’ny CB-n’ny zandary. Ny alatsinainy 29 jolay alina no nitrangan’ny fanafihana teratany sinoa mpandraharaha ka tamin’izany no nahavoatifitra ilay ben’ny Tanàna tompon-trano nofain’ireto teratany sinoa ireto. Lasan’ireo mpanafika tamin’izany ny vola mitentina 60 tapitrisa Ar. Nahazo antso ny zandary avy ao amin’ny borigady ka nidina haingana teny an-toerana. Ny CB-n’ny zandary no nitarika izany, niafara tamin’ny tifitra nahazo azy. Jiolahy iray lavo nandritra ny fanafihana raha efa nisy iray kosa tratra niaraka tamin’ireo ambim-bola anjarany. Nanamafy ny zandary fa mitohy ny fikarohana ny naman’ilay jiolahy tompon’antoka tamin’izao nahafaty ny CB sy ny ben’ny Tanàna izao.Jean ClaudeL’article Taorian’ny nahafaty ilay ben’ny Tanàna: tsy tana ny ain’ilay CB-n’ny zandary voatifitry ny dahalo a été récupéré chez Newsmada.
Fihariana: misy ny vahaolana hoan’ ny fambolena
“Azo atao tsara ny mamerina ireo avy any ambanivohitra mibosesika an-tanan-dehibe. Anisan’ny olana sy mahakivy azy ireo ny hakelin’ny vokatra miakatra. Nanao fikarohana sy vahaolana amin’izany izahay ka anisan’izany ny zezika”, hoy ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Zezika Malagasy (Zezima), Ramangalahy Eric. Nanteriny fa mampitombo betsaka ny vokatra vokarina ny fampiasana izany ary efa maro ireo tantsaha resy lahatra ka mampiasa izany amin’izao fotoana izao. “Mamelona indray ny nofon-tany izy io ary miady amin’ny nofon-tany efa vizaky ny zezika simika. Tsy mifidy voly ary natoraly tanteraka”, hoy ihany izy. Efa nandalo fitiliana sy andrana samihafa ary efa nankatoavin’ny minisiteran’ny Fambolena.Nampitombo ny vokatra miakatra… Tsy vitan’izany fa efa voatsirika ny akora nanamboarana azy, toy ny zezim-pahitra sy ny fako ary ireo singa mandrafitra izany. “Nahazoana tombony betsaka ny voka-bary sy ny legioma nampiasana azy io nefa kely fotsiny ny fatra ampiasana amin’izany. Mampitombo ny vokatra rahateo ny fampiasana azy ary afaka mifangaro amin’ny zezika hafa koa”, hoy ihany izy. Nanomboka ny taona 2006 ny nihodinan’ny orinasa. Manome asa ho an’ny olona miisa 35 izy ireo ary Malagasy avokoa. Mamokatra 25 t isan-kerinandro eo izy ireo ary efa misy ny vokatra raisin’ny minisiteran’ny Fambolena manokana. Natao anaty fonosana 25 kg izany mba ho mora ny mitondra azy ary mba ho zakan’ny fahefa-mividin’ny mpamboly sy ny tantsaha.Synèse R. L’article Fihariana: misy ny vahaolana hoan’ ny fambolena a été récupéré chez Newsmada.
Natao famotorana tamina raharaha halatra fiara niseho teny Masindray Avaradrano, ny zoma lasa teo, ny olona miisa fito. Nandrava an’ilay fiara tsy mataho-dalana sy naka ny kojakoja teo amin’io fiara io ny lehilahy iray. Niray tsikombakomba taminy sy nividy ny entana halatra ny olona enina ambiny. Fantatra fa mpamilin’ ilay fiara lasibatra ihany ity nandrava sy nangalatra ity. L’article Halatra fiara est apparu en premier sur AoRaha.
Fibatana fonjamby: nanome 8 tapitrisa ariary ny Minisitra mpiahy
Taorian’ny vokatra tsara nentin’ireo mpibata fonjamby malagasy avy any Maorisy, nandritra ny lalaon’ny Nosy, nanome fankasitrahana azy ireo, ireo Minisitra mpiahy, avy eo anivon’ny Minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka sy ny Minisiteran’ny asa sy ny fampananan’asa ary ny lalana sosialy, omaly. Vola mitentina 10 tapitrisa ariary no natolotra azy ireo nandritra izany. Nanambara Andriamatoa Minisitra, fa ny taranja fibatana fonjamby no tena nitondra an’i Madagasikara ho eo amin’ny laharana faharoa, ka izany indrindra no anton’izao fihetsika feno fankasitrahana izao. Sady nanandratra avo ny fanevam-pirenena izy ireo no nahatanteraka ny voady nataony, talohan’ny nialana teto an-tanindrazana dia ny hitondra vokatra tsara. Mbola vonona hatrany moa ny Minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka hanohana ny mpanao fanatanjahantena malagasy, indrindra ireo manao ny ainy tsy ho zavatra ho fiarovana sy fitondrana avo ny voninahi-pirenena. Mi.RazL’article Fibatana fonjamby: nanome 8 tapitrisa ariary ny Minisitra mpiahy a été récupéré chez Newsmada.
Famoronana asa : fanjairana akanjon-dehilahy
Sehatrasa tena vitsy mpila ny fanjairana akanjon-dehilahy. Tanàn-dehibe Ambatondrazaka, nefa sarotra ny mahita olona manjaitra pataloha. Any amin’ny 12 km, vohitra tsy ao anatin’ny kaominina renivohitra akory vao mahita lehilahy manaiky manao izany asa izany ! “Ny fitobahan’ny lamba tonta na friperies no mahatonga izao”, hoy ny mpanajary akanjo efa nampiasaina ( retaillage). Mora lavitra no ho ny mividy ravin-damba sy manarama mpanjaitra tokoa ny vidin’ny akanjo tonta. Ary feno misavovona, ity karazam-pitafiana tokoa ny efitrano fiasan’ity rangahy mpanao retaillage. Fa velon-taraina koa ireo mivarotra akanjo vaovao “zaitra an-tsena”. Manahirana ny tantsaha tambanivohitra izany hiakanjo fitafiana efa nipetaka tamina hoditr’olona hafa izany. Ka dia izy ireny no tena mpanjifa mavitrika ny “zaitra an-tsena”. Saingy ankehitriny…efa mirona any amin’ny fripy koa izy ireny : maro isafidianana sy be haingony ireo avy any Sina ka mahasarika.Vokany : saika tsy misy mihodina intsony ireo orinasa mpanenona lamba, namelona tokantrano maro.. Ireo foibe manofana ho mpanjaitra koa moa, toa ny akanjom-behivavy fentina mianjaika ny betsaka .Fanamby lehiben’ny mpitondra, hisian’ny fandrosoana, ny famoronana asa. Angamba rehefa mihatsara ny fahefa-mividin’ny Malagasy, hiverina hividy ravin-damba sy hampanjaitra indray izy… Dia ho afaka hitrena, toy ny Barea, indray ny Sotema, ny Cotona… RarivoL’article Famoronana asa : fanjairana akanjon-dehilahy a été récupéré chez Newsmada.
Me Razafinjatovo Willy: “Mila manana depiote izay ho lehiben’ny mpanohitra”
Mbola resabe hatramin’izao ny momba ny ho mpanohitra. Nitondra ny heviny momba izany ny mpahay lalàna, ny Me Razafinjatovo Willy.“Raha ohatra ka tena mpanohitra tokoa ilay olona, voasoratra sy eken’ny eny amin’ny minisiteran’ny Atitany: tsy maintsy mba manana solombavambahoaka eny amin’ny Antenimierampirenena afa-midinika sy manohitra tokoa izy.” Izay ny fanehoan-kevitry ny mpahay lalàna, ny Me Razafinjatovo Willy, ny amin’izay ho lehiben’ny mpanohitra eny anivon’ny Antenimierampirenena.Raha ety ivelany ny tena ka hisoratra fotsiny eny amin’ny minisiteran’ny Atitany hoe mpanohitra sy mahazo taratasy ny amin’izany: tsy izy izay, satria afa-manao an’izay avokoa io olona rehetra amin’ny elakelaka-trano. Na mpivarotra izy, na mpisolovava, na mpiandry omby… Lasa mpanohitra avokoa izany izay misoratra sy mahazo taratasy ny amin’izany, nefa tsy manana solombavambahoaka na iray aza ao amin’ny Antenimierampirenena. Tsy izay satria afa-manao izay avokoa ny rehetra.Farafaharatsiny, ny lojika tokony hapetraka: tsy maintsy mba manana solombavambahoaka izy vao afa-kiteny sy manana ny toeran’ny mpanohitra ao amin’ny Antenimierampirenena. Inona no hataon’ny hoe mpanohitra ao amin’ny Antenimierampirenena raha tsy manana solombavambahoaka izy?Na izay aza ny fanehoan-kevitry ny mpahay lalàna toy izany, ohatra: anisan’ny olana fototra amin’ny fametrahana izay ho lehiben’ny mpanohitra eny anivon’ny Antenimierampirenena ny tsy fisian’ny didy fampiharana ny amin’izany. Mandra-pahoviana?R.Nd. L’article Me Razafinjatovo Willy: “Mila manana depiote izay ho lehiben’ny mpanohitra” a été récupéré chez Newsmada.
CC Esca: afa-po ireo nankafy ny kalon’i Naly Rakotofiringa
Mipetraka ho fahatsiarovana tsy hay hofafana ny fampisehoana, omaly tolakandro tetsy amin’ny CC Esca Antanimena, ho an’ireo marobe tonga nankafy izany. Nahafa-po ny hetsika, ary tsy fahita firy fa sady namelombelona ny lasa no nanome voninahitra manokana ny hakanton’ny hira fahiny.Nomen-danja manokana, nandritra ny ora telo, ireo sanganasan’i Naly Rakotofiringa, mpamoron-kira, havanana tamin’ny fitendrena piano, fanta-daza, tany amin’ny taona 50 tany. “Mba tsiditsidiho”, “Mariazy”, “Toera-manirery”, “Ny vady”, santionany amin’ireo hira nahafantarana azy ary naverina nanakoako tetsy amin’ny CC Esca. Ifandovan’ny taranaka mifandimby ny fankafizana ny hiran’i Naly Rakotofiringa. Porofon’izany ny fahamaroan’ny tanora tonga teny an-toerana. Hain’ireo mpanakanto tanora ny mamelona indray ireny kalon’ny fahiny ireny.Nanaporofo izany ry Gothlieb, Nanie, Luk, Lily ary i Mirana (Ry Kala Vazo), nampian’i Salomon sy i Lilie ary i Zozo. Mbola voatazon’izy ireo ny mahakalon’ny fahiny ny hira.Landy R. L’article CC Esca: afa-po ireo nankafy ny kalon’i Naly Rakotofiringa a été récupéré chez Newsmada.
Antafia-Maevatanana: natsahatra ny fitrandrahana volamena
Nidina tany amin’ny fokontany Antafia, any Maevatanana ny ao amin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany. Hita tamin’izany ny mbola fanohizana fitrandrahana volamena ao anatin’ny faritry ny orinasa Kraoma ataon’ny Sinoa, ka nanapa-kevitra ny minisitera nampitsahatra izany fitrandrahana izany. Nogiazana ny fitaovana nampiasaina tamin’izany. Nanazava ny minisitra , Ravokatra Fidiniavo fa efa tapitra tamin’ny novambra 2018 ny fe-potoana fifanarahana teo amin’ny orinasa Kraomita Malagasy sy ireo Sinoa mpitrandraka volamena ireo, nefa mbola notohizana ihany. Nampiasa akora simika izy ireo, toy ny mercure lasa mandoto rano, manimba ny tontolo iainana, ka miteraka fiantraikany ratsy ao amin’ny fahasalaman’ny mponina manodidina.Betsaka ny fitrandrahana tsy ara-dalàna any amin’iny faritra iny, mampifandray an’Alaotra sy Betsiboka, indrindra momba ny fitrandrahana volamena. Olon-tsotra mandeha irery, mifanaraka amin’ny mpanangom-bokatra mandeha irery ihany koa. Samy tsy misy tambiny izany ho an’ny kaominina sy ny fanjakana foibe. Ankoatra izay, olana lehibe ny fidiran’ny hafa mitrandraka ao amin’ny faritry ny orinasa Kraomita Malagasy, izay orinasam-panjakana. Betsaka ny tatitra tsy tonga momba izany any amin’ny Anor (Agence nationale de l’or) ka zary fatiantoka goavana ho an’ny fanjakana. R.MathieuL’article Antafia-Maevatanana: natsahatra ny fitrandrahana volamena a été récupéré chez Newsmada.
Fampandrian-tany any Atsimo :: Nandà tsy nandray enimpolo tapitrisa ariary ny lietnàn’ny Tafika iray
Misy lehilahy manodidina ny dimy arivo voalaza fa dahalo niova fo, ao Esira, no arahi-maso akaiky amin’izao fotoana izao, araka ny nolazain’ny jeneraly Andriamasimanana William Michel, Kaomandin’ireo Tafika mampandry tany any Atsimo na ny “Zrps Alpha”. “Misy mitady hifampiraharaha amin’ireo Tafika ny dahalo”, hoy izy. “Nolavin’ny lietna iray anefa ny fanambazana azy vola enimpolo tapitrisa ariary avy amin’ireo dahalo ka deraiko manokana io manamboninahitra io”, hoy hatrany ilay manamboninahitra. Ankoatra izay, voalazan’ny loharanom-baovao iray hafa ny amin’ny fakan’ireo Tafika ny ombin’olona miisa efatra amby fitpolo sy dimanjato nogiazin’izy ireo fa tsy natolony ny mpitandro filaminana manao ny famotorana, tany Ambahikily-Morombe, tamin’ny 29 jolay lasa teo. “Tsy anjaran’ny Tafika ny migeja sy mamerina ireo omby halatra tra-tehaka mandritra ireo hetsika atao. Misy ny vaomiera manokana manao izany. Antsoina ireo tompon’omby mba hitondra ny taratasy mazava an’ireo omby mba hanatona ilay vaomiera”, hoy ity jeneraly ity. L’article Fampandrian-tany any Atsimo :: Nandà tsy nandray enimpolo tapitrisa ariary ny lietnàn’ny Tafika iray est apparu en premier sur AoRaha.
Fitondrana tsara tantana: fokontany fahafolo iasana Anosibe Andrefana II
Fokontany fahafolo hanatanterahan’ny Conseil de developpment d’Andohatapenaka (CDA) fampiroboroboana ny fitondrana tsara tantana ny fokontany Anosibe Andrefana II. Tanjon’ny tetikasa ny fampandraisana anjaran’ny olom-pirenena ho an’ny asa rehetra ao anatin’ny fokontany misy azy. Anisany ny fanadiovana ny tanàna, ny fanentanana hanefa ny adidy hifidy, ny fanefana ireo adidy eo anivon’ny fokontany, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny tetikasa ao amin’ny CDA, Rabarison Ny Ranto, omaly. Sahanasa maromaro ny hotanterahina ao anatin’ny fokontany. Fanentanana miankina amin’ny lohahevitra nosafidin’ny mponina: fahadiovana sy fidiovana. Fanofanana ny andrimasom-paritra momba ny andraikitry ny olom-boafidy sy ny solontenam-panjakana. Asa lehibe koa ny fametrahana ny sehatra ifanakalozan’ny mpitondra sy ny mponina hivoahan’ny hetahetan’ny vahoaka. Manampy ireo ny fisian’ny tahiry ahafahana manao fotodrafitrasa hanatsarana ny fiainan’ny mponina. Mikarakara fifaninanana ho an’ny fokontany folo mpiara-miasa hamolavola tetikasa misy fiantraikany amin’ny fiarahamonina ny tetikasa. Hatrany amin’ny 6 tapitrisa Ar ny loka azon’ny mpandresy.30 taona mahery niasana eo amin’ny fokontanin’Andohatapenaka sy ny manodidina ny CDA. Tsapa ny fiovana eo amin’ny fifandraisan’ny vahoaka sy ny mpitantana ny fokontany. Nahitana taratra ny fivoarana koa ny fahadiovana ary tsy malaina manefa latsakemboka amin’ny RF2 izy ireo. Mpanohana ny tetikasa ny Développement et paix Canada. Ho an’ny fokontany Anosibe Andrefana II, 2 034 ny tokantrano hisitraka tombontsoa mivantana amin’ny tetikasa.Vonjy A.L’article Fitondrana tsara tantana: fokontany fahafolo iasana Anosibe Andrefana II a été récupéré chez Newsmada.
Zaza nalaina an-keriny
Votsotra teny am-pelan-tanan’ ireo jiolahy, omaly maraina ilay zazavavikely, enin-taona, nisy naka an-keriny, tany Ambodirano Amparafaravola, andro vitsy lasa izay. Voalaza fa nisy ny fanomezana vola an’ireo mpaka an-keriny izay mitentina roapolo tapitrisa ariary. Manohy ny fanadihadiana sy ny fikarohana azy ireo kosa ny mpitandro filaminana. L’article Zaza nalaina an-keriny est apparu en premier sur AoRaha.
Minisitra A. Hajo: « Mila zavatra maharitra isika »
Amin’ny lafiny rehetra fa tsy fanatanjahantena ihany. Norasin’ny minisitra mpiahy, Andrianainarivelo Hajo, afakomaly tetsy Anosy, ny Makis, nibata ny medaly volamena tamin’ny “Lalaon’ny Nosy” tatsy Maorisy. Naneho fahavononana ny hanohana ny ekipam-pirenena ho an’ny taranja rugby ny tenany. « Hamafisina hatrany ny fiahiana sy ny fanohanana ity taranja ity. Betsaka ny sehatra tokony hifanampiana sy ny tokony handehananareo. Ny antsika, zavatra maharitra fa tsy vonjy tavanandro ny atao… Hiezaka mba tsy ho fitaovana hihorakoraka fotsiny ny bandy kely. Misaotra anareo nampiseho fiezahana na fandraisana anjara voalohany aza nefa niambozona ny medaly volamena avy hatrany », hoy ny minisitra. Maniry ny tenany mba ho volamena hatrany isaky ny “Lalaon’ny Nosy” ka anisan’izany ny hatao any Maldives.Nampihetsika ny hambom-poNanteriny fa efa voalohany isika sy ny firenentsika ka tokony hiezaka ny ho voalohany ary hotazonina hatrany izany… « Tena nampiakatra avo ny hambom-pom-pirenena ary voaporofo fa mahavita zavatra ny tanora », hoy ihany izy. Nambaran’ny filohan’ny Malagasy rugby, Rakotomalala Marcel, kosa fa vao dingana voalohany ihany iny. Hiezaka ny hitondra avo hatrany ny voninahitry ny firenena izy ireo. « Efa manana fahaiza-manao ireo mpilalaontsika ary hiatrika ny “Jeux africain” sy handeha amin’ny “Lalao Olympika” ary koa miomana amin’ny tompondakan’i Afrika sady fifanintsanana amin’ny fiadiana ny amboara eran-tany”, hoy izy. Nanolotra fanampiana ho azy ireo ny ministra mpiahy taorian’izany.Synèse R. L’article Minisitra A. Hajo: « Mila zavatra maharitra isika » a été récupéré chez Newsmada.